कसले दर्ता गर्दैछ एमाले? – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
कसले दर्ता गर्दैछ एमाले?
नेकपा (एमाले) को नामबाट पार्टी दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा परेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को स्थायी कमिटी बैठकमा गम्भीर छलफल भएको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरुले एमाले दर्ताको लागि निवेदन दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै लगाएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबारको बैठकको सुरुवातमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेको नामबाट पार्टी दर्ता गर्न कसले लगायो? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जवाफ मागेका थिए।
‘एमालेको नामबाट पार्टी दर्ता गर्न कसले लगायो? यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ। यदि कसैले लगाएको भए कारबाही गर्नुपर्छ’, प्रचण्डको अभिव्यक्ति एक सदस्यले सुनाए। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाले पार्टी दर्ता गराउने ओलीको षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। ‘यो आश्चर्यको कुरा भयो। पार्टी फुटाउने प्रधानमन्त्रीको षड्यन्त्रपूर्ण काम हो। पार्टी फुटाउनका लागि यस्तो भएको हो’, खनालले भने। यस्तै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता गराउन ओलीको निर्देशन रहेको दाबी गरे। गौतमले प्रमाण पुर्‍याउन सक्ने पनि बताए।
साथै गौतमले दल दर्ता गर्ने उपयुक्त बेला पनि नभएको सुझाव ओलीलाई दिए। ‘एमाले नाममा दल दर्ता गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अहिले यस्तो काम गर्ने बेला होइन’, उनले बैठकमा भनेका छन्।
नेताहरुको आरोपपछि ओलीले बैठकमा जवाफ समेत दिए। ‘बैठकमा प्रधानन्त्री ओलीले म यही पार्टीको अध्यक्ष हुँ भनेर भन्नुभयो’, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
स्थायी समिति बैठकमा केही दिनयता सीमा समस्याको विषयमा छलफल भइरहेको थियो। पार्टी दर्ताको लागि निवेदन दिएको विषय बाहिरिएपछि आजको बैठकको एजेन्डा बनेको थियो।
निर्वचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार झापाकी सन्ध्या तिवारीले नेकपा (एमाले) दर्ताका लागि सोमबार निवेदन दिएकी छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक
अन्त्य भयो संसद अधिवेशन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुसार अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना संघीय संसदलाई जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले संघीय संसदक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा नेपालगञ्जस्थित नेकपाको पार्टी कार्यालयमा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले धर्ना दिएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र संगठन विभागका प्रमुखको असहमतिका बाबज
न्युज कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा चुनौती नै चुनौतीका चाङ
अन्तरवार्ता नेपालमा नयाँ खाले कोरोना होइन, भाइरस उस्तै हो, संक्रमणका केसमात्र फरक : डब्लुएचओ नेपाल प्रतिनिधि(वार्ता)
कृषी आइतबारसम्म कुन-कुन जिल्लामा देखियो सलह?
न्युज चार मेट्रिक टन जडीबुटी नेपालगन्जका गोदाममा थन्कियो
अन्तर्राष्ट्रिय कारभित्र यौन क्रियाकलाप गरेको आरोपमा राष्ट्रसंघका २ कर्मचारी निलम्बित